Lezienụ iji PayPal ma ọ bụ kaadị kredit, kedu nke ka mma | ECommerce ozi ọma
Lezienụ iji PayPal ma ọ bụ kaadị kredit, kedu nke ka mma
Susana Maria Urbano Mateos | | Marketing, Nche
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ mmadụ na - azụ ihe n ’ịntanetị, ma ọ bụ n’ kọmputa kọmputa ha ma ọ bụ n ’ekwentị ha. Imirikiti azụmaahịa Ecommerce na-anabata ịkwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ jiri akaụntụ PayPal. Ọzọ anyị ga-ekwu ntakịrị maka otu nchekwa iji otu ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ.
1 Lezienụ na PayPal
2 Lezienụ na kaadị akwụmụgwọ
3 Kpachara anya mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị
Lezienụ na PayPal
PayPal kwuru na a na-echekwa data niile ego na nkeonwe nke ndị ọrụ na nzuzo yana sava ya na-elele ihe nchọgharị ahụ iji hụ na enwere ike iji teknụzụ zoro ezo na echekwara data ahụ n'enweghị nsogbu. Nke a ugwo n'elu ikpo okwu ọbụna na-akwụ hackers onye na-ahụ ọma na gị usoro ka n'ihu hụ na nchedo nke ọrụ ozi.
Lezienụ na kaadị akwụmụgwọ
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kaadị akwụmụgwọ niile na-enye ego, akụkụ nke echekwabara ma na-ala azụ ọtụtụ omume cybersecurity PayPal na-eji. Lọ akụ anaghị akwụ ụgwọ ndị na-agba ọsọ iji kpachara anya maka ntụpọ dị na sistemụ nchekwa ha.
Kpachara anya mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị
Naanị n'ihi na anatabeghị PayPal apụtaghị na ọ gaghị eme. N'ezie, ọ maara na ndị na-agba ọsọ na-agba mbọ imebi nche nke sava nke ikpo okwu a. Ya mere, yana usoro nchebe nke ọrụ ndị a na-enyeworị, onye na-azụ ahịa ga-abụrịrị ọrụ maka ụzọ ha si ejikwa ozi ego ha.
Achọpụtala na okwuntughe nke ndi ahia jiri dikwa nfe icheta, nke pụtara na ha dịkwa mfe ịkwụsị. Ya mere, gbaa mbọ lelee ihe ndekọ ego na kaadị akwụmụgwọ ugboro ugboro, ma zere iji otu paswọọdụ maka ihe niile.
Na njedebe na mgbe ọ bụla enwere ike, ọ kachasị mma iji PayPal dịka usoro ịkwụ ụgwọ kama kaadị akwụmụgwọEbe ọ bụ na ọtụtụ nke data vulnerability na-abịa site na anụ ahụ swiping kaadị akwụmụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Lezienụ iji PayPal ma ọ bụ kaadị kredit, kedu nke ka mma
Etu esi emepụta usoro ịre ahịa n'ịntanetị na Twitter
Etu esi achọta niche ahia ecommerce bara uru?